Ihotele iLos Maquis - Buchupureo Matrimonial 1 - I-Airbnb
Ihotele iLos Maquis - Buchupureo Matrimonial 1
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguBarbara
Efumaneka eBuchupureo, eLos Maquis inikezela ngamagumbi akhanyayo kunye nesidlo sakusasa samihla le. Iindwendwe ziza konwabela igadi entle. Inemigangatho eyenziwe ngamaplanga aqinileyo, amagumbi eLos Maquis abonisa iintaba negadi. Zonke zifakelwe into eyenza kufudumale namagumbi okuhlambela apheleleyo anomatshini wokomisa iinwele nezinto zokuhlamba zasimahla. Izinto zebhedi neetawuli ziyafumaneka.
Ifumaneka kanye kwidolophu yaseBuchupureo kwindawo epholileyo negqibeleleyo. Iitoni zeendawo ezintle zokuhamba ngeenyawo okanye ngebhayisekile, unokonwabela igadi yam enezihlalo ezintle ezingaphandle kunye neebhedi ekuthiwa zii-hammock.
4.84 · Izimvo eziyi-33
Sisekuhambeni imizuzu eyi-10 ukusuka eBuchupureo 's Main Square kwaye yimizuzu eyi-15 ukusuka elunxwemeni. I-Cobquecura ikude ngeekhilomitha eziyi-9.
Ndihlala kuloo ndlu ngoko ndihlala ndifumaneka ukuze ndifumaneke kwiindwendwe zam, kodwa ke, ndihlala kwindlu yamaplanga ezimeleyo ukusuka kwindlu ephambili apho iindwendwe zam zikhoyo, nto leyo endizishiyelayo ukuze zihlale zodwa